Palitao antimicrobial sy antiviral light down: ny virus dia zavamananaina kely sy tsotra izay tsy misy afa-tsy karazana asidra nukleika (ADN na RNA) izay tsy maintsy miaina anaty sela misarona ary mihamaro amin'ny famerenana. afaka ma ...
Fepetra fisorohana sy fifehezana ny areti-mandringana _ Fahalalana fisorohana valanaretina
Andininy fisorohana ny valanaretina Coronavirus vaovao 、 Fomba 1 hiarovana ny tenany amin'ny valanaretina pnemonia vaovao? 1. Ahenao kely ny fitsidihana ireo faritra be olona. 2. Atsofohy matetika ao an-trano na any am-piasana ny efitranonao. 3. Manaova sarontava foana rehefa manana f ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-04-05
Ny Index Higg novokarin'ny Coalition ho an'ny akanjo maharitra, ny Higg Index dia fitaovana iray ahafahan'ny marika, mpivarotra ary ny fotodrafitrasa isan-karazany - isaky ny dingana amin'ny fivezivezena maharitra - handrefesana tsara sy ...